Orinasa mpanamboatra China Erasers | SJJ
Ny erasers dia zava-dehibe amin'ny vatasaram-panoratanao na ny pensilihazo, izay hamafana ny tsy fahombiazanao sy ny hadisoana nataonao rehetra hatramin'izao. Ny erasers dia kojakoja ilaina amin'ny birao ho an'ny mpianatra ary azon'izy ireo ampiasaina izany mandritra ny fanaovana sary, fanaovana sary na fanitsiana zavatra.
gaomas dia ilaina amin'ny boaty fanoratana na pensilihazo, izay mamafa ny tsy fahombiazanao sy ny hadisoana rehetra nataonao mandraka ankehitriny. gaomas ireo dia kojakoja ilaina amin'ny birao ho an'ny mpianatra ary azon'izy ireo ampiasaina izany mandritra ny fanaovana sary, fanaovana sary na fanitsiana zavatra.
Ireo fampiroboroboana rehetra ataonay hamafafa ny ankizy dia vita amin'ny akora tsy misy poizina, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny ankizy sahirana amin'izany ianao. Fitaovana tsy misy poizina 100%, mifanaraka amin'ny fenitra fitsapana EN71, CPSIA, ASTM, REACH. Misy ny endrika manokana sy ny fonosana isan-karazany.
Mety amin'ny sokajin-taona rehetra
Mifanatreha faharetana isan'andro
Fitaovana TPR tsy misy poizina
Tongasoa serivisy OEM
Teo aloha: pensilihazo
Manaraka: Ball Pens
voafafa vita amin'ny fanao
famafana miaraka amina sary famantarana
famafana misy sary pirinty
famafana tsy misy poizina
famafana vita pirinty